WSL DistroLauncher chishandiso chevashandisi veWindows kushandisa Gnu / Linux kana yevashandisi vatsva veGnu / Linux kushandisa Windows? | Linux Vakapindwa muropa
WSL DistroLauncher chishandiso chevashandisi veWindows kushandisa Gnu / Linux kana yevashandisi vatsva veGnu / Linux kushandisa Windows?
Nhau dzeLinux subsystem yeWindows dzakabata vateereri vazhinji uye dzakaita kuti vashandisi vazhinji vayanane neWindows. Asi mushure memwedzi yakati wandei neshanduro gare gare, tinogona kutaura kuti zvikamu zvina chete zvinoenderana neiyi subsystem, kureva Ubuntu, Debian, OpenSUSE uye Kali Linux.
Zvirongwa zvevashandisi vazhinji, makambani uye kunyangwe kubva kuMicrosoft vanga voda kuve nemazana eGnu / Linux migove inoenderana neiyi Subsystem munguva pfupi., asi havana kubudirira. Ndokusaka a chishandiso chinonzi WSL DistroLauncher icho chichatibatsira kuve neipi zvayo Gnu / Linux kugovera mukati Windows 10.
Ichi chishandiso Mahara Software uye ichatibvumidza isu kumisikidza chero kupihwa kweGnu / Linux paWindows 10 nekuda kweiyo Hyper-V yekuona iyo Windows 10 chishandiso ichi chinogona kuwanikwa kuburikidza ne yepamutemo Github repository. Kana tangoisa iyo nekuishandisa, tinogona kuita kuti kuisirwa kwakaiswa kukwire kuMicrosoft Store kuitira kuti vamwe vashandisi vaiise pane yavo Windows 10. Nekudaro, isu tinogona kuisa Fedora uye mushure mekuiisa pane yedu Windows 10, chiise paMicrosoft Store. Asi hazvisi zvese zviri nyore uye zvakapusa.
Kune rimwe divi, Microsoft yataura kuti ichave yakakosha pakubvuma kugoverwa kwatumirwa. Uye kune rimwe divi, kushandisa Hyper-V kuchaita kuti mamwe masevhisi ekuona asashomeka nekuda kwenjodzi yeblue screen. Saka isu takatarisana nechombo icho akaberekwa kuitira kubatsira makambani uye manejimendi manejimendi asi izvo pakupedzisira zvichave musoro yavo uye pamwe inokonzeresa vashandisi vazhinji kupedzisa kushandisa Gnu / Linux panzvimbo yeWindows. Chero zvazvingaitika, zvakare, Gnu / Linux inoratidza kuva nenharaunda yekugara uye nekupa mhinduro idzo dzimwe nzira dzekushandira dzisingapi, kunyangwe mune ino iri yehurongwa hwekushandira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WSL DistroLauncher chishandiso chevashandisi veWindows kushandisa Gnu / Linux kana yevashandisi vatsva veGnu / Linux kushandisa Windows?
Shandisa zvakare Windows? matambudziko, ini handisi kudzokera kuWindows kana kuseka. Kwaziso
Ah asi iyo Windows inoshandiswa kune chimwe chinhu chinopfuura Steam? Kutanga nhau
OpenEXPO Europe inotisvitsa iyo Yechitatu Shanduro yeakavhurwa mibairo
Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa yakavhurikaSUSE tumbleweed